Home News Socdalkii Madaxweeyne Gaas ku tagay Garacad oo Dhabarka Jebisay Qorshii R/wasaare Kheeyre...
Socdalkii Madaxweeyne Gaas ku tagay Garacad oo Dhabarka Jebisay Qorshii R/wasaare Kheeyre Ee Deegaanadda Maamulka Puntland!!
Cabdiweli Maxamed Cali Gaas Madaxweynaha Puntland ayaa dhagax dhigey deked cusub oo laga dhisayo deegaanka Garacad ee gobolka Mudug,halkaasi oo uu ka baaqday R/wasaare Xassan Cali Kheeyre.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa la qorsheeynaayay in uu ka qeeyb galo dhagax dhigaasi hase’yeeshee waa uu ka baaqday ka dib Culeeys lasoo saaray oo dhanka Maamulka Galmudug ah.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in ay ka jawaabayaan baahida dadka kunool gobolka Mudug qeybta Puntland,taasna ay tahay sababta uu garacad u tagay,waxeeyna dadka deegaanku dhaliileen R/wasaare xassan Cali Kheeyre.
R/wasaare xassan Cali Kheeyre ayaa waxaa ay tani ku noqoneeysaa Culeeys siyaasadeed oo horleh maadaama sababaha uu Puntland u tagay ay qeeyb ka aheed kasbasho bulsho,waxaana ka baaqashada Garacad ay jebisay raadiisii.
Previous articleGolaha Amaanka oo eedeyn dusha uga tuuray dowladda Somaliya! Waa maxay Qorshaha Farmaajo
Next articleAmnigga Caasimadda oo isku tuur-tuur galay iyo Farmaajo iyo Kheeyre oo ka Walaacsan Cidii ay u wakiilan lahaayeen